Esibukweni Broken lokho kuyiphupho nje? Phula esibukweni iphupho - kuyini?
Yini iphupho ukuphula nesibuko? Umbuzo uwukuthi ngempela ezithakazelisayo. Wamisa abantu bonke abanesithakazelo isihloko amaphupho. Nokho, isihloko kuyajabulisa futhi zihlukahlukene, ngakho kuyasiza ukuxoxa ngakho ngokuningiliziwe.
Kufanele kuqashelwe ukuthi izimpendulo embuzweni ukuthi iphupho ukuphula esibukweni, kukhona inala. Nokho, okokuqala Ngithanda ukunitshela incazelo ezivamile. Ngakho abantu abaningi bakholelwa ukuthi nesibuko ephukile kuyinto kuzalwa izinhlelo ebhidlikayo nobuhlungu engqondweni. Mhlawumbe lowo mphuphi walelo ulinde esikhathini esizayo esiseduze akuyona isikhathi esingcono kakhulu. Abanye abakholelwa ngisho nokuthi kulezi zikhathi engozini enkulu ikakhulukazi bokulahlekelwa othile osondelene. Futhi iseluleko main lapha - hhayi ukuba zigcwale amanzi, futhi kungcono ukuba alungiselele lo umugqa omnyama. Yiba nesineke - ke singaba usizo kabi. Ubunzima kuyoba, kodwa into esemqoka - khumbula ukuthi lokhu kuyinto yesikhashana nje futhi ngokushesha noma kamuva okungekuhle sesivivinyo siphele.
Kodwa akugcini lapho, yini iphupho ukuphula esibukweni. Uma umuntu eselibona ke ubulala futhi sichitha isihloko, lokhu kusho lokhu okulandelayo - maduze ukufinyelela amanye ulwazi olufihliwe, futhi ngeke eziphonsa abe ukushaqeka real. Mhlawumbe kuzoba into ngokuphathelene ukukhashelwa ngu umngane oseduze noma isihlobo. Kodwa ukuphula isibuko esincane - ezinkingeni impahla. Kodwa futhi kuphakama ngenxa yanoma iyiphi 'elisekela. "
abathanda Dream Incwadi
Le ncwadi ukutolika kancane kuchaza ukuthi iphupho ukuphula esibukweni. Lapho lowo mphuphi walelo akubonayo reflection kothandekayo wakho, kusho ukuthi ubuhlobo ngokushesha kuza nesikhathi edabukisayo. Mhlawumbe kuzoba abanye enkingeni, noma ngisho ukuxabana enkulu.
Bheka wena njengoba smiling, abe yizicucu - akukuhle. Thina kufanele lilungele ushintsho - bangase ezisabekayo. Bona ngokwabo, kodwa ngokudabukisayo - ezinkingeni nokukhungatheka. Bheka, njengoba izingxenyana ebukeka eziphukile ongamazi - kungcono uphawu. Lokho umuntu empilweni yangempela akukhona ngempela okuyiwo wokwelapha nabathandekayo babo, izihlobo nabangani. Dream incazelo nguMkhandlu esikhathini esizayo esiseduze ukuba aphinde acabange salo sengqondo sokungafuni kule. isimo Kungenjalo iphenduka edabukisayo, futhi zonke ukukhulumisana okuhle izolahleka futhi sonakele. Yilokhu uyaphupha aphule esibukweni ngephupho.
Lena enye incwadi Izincazelo azosiza ukuphendula umbuzo yini iphupho ukuphula esibukweni. Inani futhi ingase ibe khona ehlukile futhi luncike kwezimo.
Nokho, uma umuntu ebona izingcezu ngasezinyaweni zakhe - ukuthola kunenzuzo ithenda (ziphumelele). Buka ekamelweni ubone elenga odongeni kwesibuko eziphukile - futhi ziwuphawu oluhle. Mhlawumbe umuntu siyonikwa umsebenzi omusha, imali eningi futhi inselele.
A isikhathi eside ukuma ambheke - ukuze inkontileka inzuzo futhi kubaluleke kakhulu noma sivumelwano. Thola nesibuko ngobugebengu emgwaqeni - lokho maduze ukuthi uyindoda eqotho futhi ezithakazelisayo emphilweni ophuphayo. Uma izingcezwana ezatholakala zabesifazane powder ezihlangene - kuya romantic kanye nokuguqulwa kuthandana. Futhi ukubona ngokwabo endlini kumnandi izibuko ngobugebengu - kute kube nenjabulo kanye nempilo yakho. Ngokuvamile, kukhona inani elihle. Nokho, kuyinto ikakhulukazi ezimweni lapho umuntu esibukweni, osuvele siphukile, futhi akasidlanga enqubeni self-ukuzibandakanya kuphela.
I lasendulo incazelo iphupho
Enye incwadi lapho incazelo kuyafaneleka ukucabangela. Phela, lokhu - a ethandwa kakhulu futhi, abaningi bathi, eyiqiniso iphupho nencazelo.
Dream ukuphula nesibuko? Inani akuyona okuhle. Ikakhulukazi uma umuntu ngokuningiliziwe wabona indlela uyawuphula ke. Lokhu kusho ukuthi esikhathini esizayo esiseduze kuyoba indlwana eziningi izinyembezi.
Kungenzeka futhi ukuthi isimo emndenini umuntu iyoba engazinzile. Uzovela ukuba izihlobo zakhe nabangane abantu babe yizitha zangempela kakhulu. Futhi cishe ngeke ngokweqile. Kungenzeka ukuthi kuzoveza nenkohliso esithile esingathí sina. Futhi lapha kubalulekile ukuba njengoba ethule (ngangokunokwenzeka esimweni esithile). Sagcina kudingeka siqhubeke.
Uma umuntu wasiphula into, bese wabheka isikhathi eside ngokusebenzisa shards - kangangokuba maduzane uzoqala ukugcwaliseka ubunzima futhi aliziphikisi. Ngeshwa, ngalesi sikhathi esinzima, lowo mphuphi walelo singakutholi ukwesekwa phakathi abathandekayo. Futhi ukubona ngokusebenzisa yomunye kuveza shards - ukunqoba ukungabi nabulungisa. Kuyoba nzima ukufakazela icala labo, noma kungenakwenzeka. Ngakho-ke kuyodingeka noma sibekezelele umthwalo akuyena obangele leso simo, noma ukumelela kuze kube sekupheleni.
Yini enye umemezele embonweni? Yini iphupho ukuphula esibukweni ephusheni? Wang yena encwadini yakhe iphupho efanekisela lokhu kuwuphawu olubi. Cishe, umuntu azilahle amaphupho akhe. Mhlawumbe, ekuphileni kwangempela uyonikwa abanye ithuba, kodwa yena uyothelekela senqabe kuwo. Ngoba esikhathini esizayo esiseduze iwukucabangela iyiphi iziphakamiso ezingenayo ngokuningiliziwe futhi sizame kokubuka shí essence yabo. Uma kungenjalo, khona-ke kuyoba sekwephuzile.
Ngisho nangaphambili, kwakunenkolelo yokuthi uma intombazanyana ngabona ephusheni, njengoba uqalisa izingcezu ezincane esibukweni ke kwakusho ukuthi ku umkhathizwe yayo ibonakala indoda naye ufuna ucansi. Bathi ayezoyitshela unina ngiphupha into enjengale. Futhi uma ayengeyena eselungele ngalesosikhathi ukushada ke ... yena okwakwenqatshelwe siphume. Futhi abazali nje waqala ukubheka ngomyeni wakhe. Kodwa manje ngesinye isikhathi, ukuze wentombazane kangcono nje sihlolisise eduze abalingani engaba ngemva leliphupho.
Kukhona incazelo enhle. Kuphela kudingeka siqale sithole lokho amaphupho umuntu. Hlukanisa nesibuko esikhulu egumbini ukuze izingcezwana ezincane cishe ukuze niphihlizwe nibe uthuli - ziwuphawu oluhle. Umemezela ukuqala ukuphila kule band elikhanyayo. Man ukushiya ukukhathala, intukuthelo kanye nobuhlungu.
Ngisho okuthile okuthakazelisa kungasho iphupho efanayo. Dream enkulu smash nesibuko? Musa nje isinqumo ngokwaso ukufa komuntu abathandekayo, ukuxoshwa emsebenzini, ukubhujiswa yobumfihlo nezinye izinkathazo. Udinga ukwehlisa umoya nje weqa ngiphuphe ngokusebenzisa iphrizimu ukuphila kwakhe. Kuyadingeka ukuba sikhumbule zonke izinto kancane ukuthi abantu embonweni futhi "zama" ngokoqobo yabo. Lokho kubalulekile ukuthola incazelo yalo ephusheni, futhi, ngokufanelekile, ukuchazwa okuyinto kuleli cala kungafaneleka. Futhi lokhu, ungakwazi ukulandela yonke ukutolika ngenhla. It weluleka ncwadi iphupho Freud. Kodwa omunye bakwazi ukusho ngokuqiniseka - empilweni kuyoba nzima futhi kumelwe sikulungele.
incwadi yesiNgisi iphupho
Leli bhuku ngempela incazelo ezithakazelisayo uchaza umbono lapho indoda ngokufutha iphula esibukweni ukuze smithereens. Okokuqala, kungcono ukuphela ubuhlobo obuseduze umlingani sakhe esasibonakala ethandekayo yokuphila. Okwesibili - kungenzeka ukuthi lokhu kuzokwenzeka ekuthatheni isinyathelo ophuphayo. Ngesikhathi lo mbono, mhlawumbe alikhulumi nanokukhuluma naleyo micabango - shiya. Kodwa-ke, cishe, imizwa ziqala ukufiphala, futhi ubuhlobo kuwukuthi umane ecasulayo futhi ngeke ejabulisayo. Ngakho wokuthi ukuzihlukanisa ngeke impumuzo umphuphi kuphela. Kodwa mhlawumbe, ngesisekelo imizwa, lo mdala uyokwenza sikuthole kubuhlungu kakhulu nokuhlanganyela nengxenye yayo yesibili. Ngakho kubalulekile ukuthi zigcinwe ngangokunokwenzeka futhi zilungile. Futhi ngisho kangcono ukuba sikhuthazele futhi sizame ukulungisa okuthile, zilethe ubudlelwano obusha - ngokuvamile kuvela ukuze siphinde sithole ugqozi.
Ukuze uthole intombazane efana amaphupho izindlela ngokukhetha umlingani okungalungile, okuyinto ayeyidinga. Ngakho, uma ungaqiniseki, ukwakha ubuhlobo nalo lolo lowo muntu noma cha, kungcono hhayi ukuba engozini kuso. Futhi uma sebeqalile kakade, kodwa musa ulethe injabulo - kungcono ukuyeka konke ihlumela phambi kwalo kudaleke umonakalo.
Incwadi ukutolika zikaNostradamus
Futhi ekugcineni, ukubaluleka ukuthi abelana nathi incwadi iphupho. ZikaNostradamus smash esibukweni - kusho ukuthini adalule umqambimanga, kwembula imfihlo. Futhi akuyona njalo iqiniso kuvela ukuthi lokho ongathanda ukuzibona. Ngoba izindaba ezingalindelekile kufanele uzilungiselele.
Izincazelo, njengoba kungabonwa, kunezindlela eziningi. Uma umuntu eselibona inqamuka kanjani phansi bese ephula esibukweni, kuba ezimweni eziningi ichazwa njengesifo iphupho ezimbi. Kodwa into - hhayi ukuba zigcwale amanzi futhi ukuba simelane nokuhlaselwa ababhekene nanoma iyiphi inkathazo. Ekugcineni, ekupheleni ezimbi ngokushesha noma kamuva.
Yini ngiphuphe indiza? Siya zindiza?
I-HDDScan v 3.3 - uhlelo lokuhlola i-hard drive